Jesus / Mary Jisos Medallion Pendant (Silver) - Popular Jewelry
Jesus / Mary Pụrụndụ Medallion Siri Anya
Ọla ọcha - $ 70.79Goolu - $ 76.79 Iche:
Ọkpụkpụ dị oké ọnụ ahịa: Sterling Silver (.925)
Ogo (dayameta): 20.5mm; jikwaa 29.0mm na mgbapụta pendant.
Dabara dabara agbụ nke 3.0mm na dị gịrịgịrị. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ịkwanye nke a na nnukwu silsila, biko kpọtụrụ anyị.
Arọ: 5.7 grams
Ọrụ dị egwu
M ga-aga n'ihu na-azụ ahịa popular jewelry. Kevin zara ajụjụ m niile ozugbo na azụta m ruru ọsọ ọsọ! Nnukwu oru